Gaari dhaqtar watay oo ku qarxay gudaha Isbitaalka Keysaney – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Qarax miino oo lagu xiray gaari uu watay mid ka mid ah shaqaalaha Isbitaalka Keysaney ayaa ka dhacay gudaha Isbitaalkaas ee magaalada Muqdisho.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in gaariga qarxay uu lahaa dhaqtar caan ka ah Isbitaalka Keysaney, kaasoo lagu magacaabo Dr. C/qaadir Xooga.
Dhaqtarka ayaa la sheegay inuu ka badbaaday weerarkaas, waxaase wararka qaar sheegayaan in qof kale ku dhintay qaraxa.
Wararka ayaa sheegaya in qofka geeriyooday uu yahay kaaliyihii Dr. Xooga, halka ay dhaawacmeen 7-qof oo isugu jiray dadkii bukaanada la joogay.
Agaasimaha warbaahinta ee maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Xalane oo la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan gudaha isbitalka Keysaney ayaa sheegay in gaariga qaraxa lagu xiray uu lahaa mid ka mid ah dhaqaatiirta cisbitalka oo lagu magacaabo Dr. Xoogga.
“Hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxaasi kaas oo ahaa kaaliyihii Dr, Xoogga Lix kalena wey ku dhaawacmeen kuwaas oo dhamaantood ah dadkii la joogay bukaannada jiifa cisbitalka, dhaawacooduna wuu fududyahay haddana waxa lagu daweynayaa cisbitilka” ayuu yiri Agaasimaha warbaahinta maamulka G/Banaadir C/fitaax Xalane.
Gaariga ayaa xilliga la qarxinaye, wuxuu yaalay goob Baakin ah oo gudaha Isbitaalka dhexdiisa ah, waxaana qaraxaan uu umuuqday mid meel Isbitaalka ka baxsan loogu soo xiray gaariga Dr. Xooga.
Lama oga cida ka dambeysay qaraxa lagu xiray gaariga Dr. Xooga uu lahaa, hayeeshe waxyaabahan qarxa ee gaadiidka lagu xiro ayaa muddooyinkaan dambe wuxuu aad ugu soo batay magaalada Muqdisho oo horay dad badan loogu dilay.
Madaxweyne Xasan oo tegay Jowhar